(1) Isithando somlilo esivivinya nesithando somlilo esifutha umlotha
Isithando somlilo esifutha insila eliphezulu esisetshenziselwa ukuhlola ngokuvamile sibizwa ngokuthi isithando somlilo se-muffle. Izinto zokwakha ezivela emazweni ahlukahlukene zethulwe ngezinga elithile futhi zinezidingo ezithile zobuchwepheshe. Lezi zincwadi zabonisa ukuthi "isithando somlilo esifutha umlotha—isithando somlilo esiwuhlobo lwe-muffle. Lesi sithando somlilo kufanele sibe nezintuba zokungenisa umoya kanye nezindawo zokujikeleza komoya, futhi kungcono kakhulu ukushisa umoya kusengaphambili nokwenza udlule ngokuzinzile. Izinga lokushisa lomlilo lingashiswa ngokulinganayo ngokulinganayo. ukusuka ekamelweni lokushisa ukuya ku-1100 ℃. Ngokolwazi, isithando somlilo sokuhlola esisetshenziswa elabhorethri yaso singaqedwa ngesikhathi esisodwa lapho kubekwa i-cupel, futhi kuyafana nangokubeka inkinobho yokuhola ekhabetheni Ngemva kokuphothula umlotha. , yonke i-cupel ingaba yikhiphe yonke ngesikhathi esisodwa.
(2) Ibhalansi nesisindo
Indlela yokuhlola umlilo iyindlela yokuhlaziya ikhwalithi, enezidingo eziqinile kubhalansi yokuhlola. Izilinganiso zegolide zakuqala zaseJapane ezinezingalo eziphindwe kabili zokuhlola igolide zazinesisindo esiphezulu esingu-1-2g, ezazinezidingo eziqinile zezisindo, ezazenziwe nge-platinum-iridium alloy. Amalabhorethri okuhlola nokuhlaziya kuzo zonke izingxenye zezwe lami asebenzisa izilinganiso zokuhlaziya ezinembayo ezinesisindo esingu-20g nokuzwela okungu-0.01mg. Amayunithi amaningi asebenzise ibhalansi yokuhlaziya enembayo nokuzwela okungu-0.001mg. Izilinganiso nezisindo zidinga ukulinganiswa okuvamile. Ngokomthwalo womsebenzi, umjikelezo wokulinganisa kufanele ube yinyanga eyodwa noma ikota eyodwa.
(3) Hlukanisa ubhasikidi wegolide
Izwe ngalinye linemithethonqubo ethile yobhasikidi wokwabelana ngegolide okunikezelwe ekuhlaziyeni. I-Japan isebenzisa iplatinum noma izingcwecwe ze-porcelain; indawo eyayiyiSoviet Union isebenzisa iplatinamu; I-India isebenzisa amafreyimu e-platinum noma e-quartz, akhiwe ngemikhono emincane eminingi. Le mikhono emincane inkomishi yeplatinamu enezimbobo ezisekelwe kumafreyimu eplatinamu noma amafreyimu e-silica ahlanganisiwe. Izinkomishi ze-silica ezinama-porous; Igumbi lokuhlola lezwe lami lenziwe ngeplatinamu noma amapuleti ensimbi engagqwali.
(4) Umshini we-Cupel kanye ne-tablet mill
Iningi lamazwe asekhaya nakwamanye amazwe alizange lenze izidingo ezicacile zomshini we-cupel kanye nomshini wokugaya i-flake, kodwa kuyadingeka ukuthi ukucindezela okwenza i-cupel kufanele kube okuhambisanayo lapho kwenziwa i-cupel, futhi ishidi le-alloy yegolide nesiliva kufanele libe. kwakheka ngokufanayo ngesikhathi sokugaya ukuze kugwenywe ukwanda kokuhlaziya iphutha.
PHAMBI Ukusebenzisa i-Gold Assaying Crucible